Chii chinoitwa nevatengesi veDhijitari?
Chii chinoitwa neDhijitari Marketer?
China, Kurume 19, 2015 Mugovera, Chivabvu 7, 2016 Douglas Karr
Ngativhurei nekutaura kuti ndaive nebasa remurume uyu pazasi, heh. Semushambadzi wedigital, tiri kutenderera kuburikidza nevatengi vedu vese pasvondo, kuongorora mashandiro avo, kugadzirisa, kutsvagisa, kuronga uye kuita mishandirapamwe yematanho. Tiri kushandisa maturusi zvakanyanya kupfuura izvi zvinotsanangurwa ne infographic - kubva kutaurirana, kushambadza, kusimudzira uye kuongorora maturusi.
IMO, vashambadziri vazhinji vanoshanda munzvimbo yavanonyanya kugaramo. Haisi tsaona kuti chiteshi icho chinovaitira zvakanakira ivo nekuti ndiyo yavanonyatsoziva. Kuva nehunyanzvi hwekuongorora hunyanzvi ndiyo inogona kunge iri pasi peaseti kune vashambadzi vemadhijitari nhasi nekuti zvinovabatsira kuti vaone kupfuura kwavo nzvimbo yekunyaradza uye vaone mikana kana mipata iripo kuburikidza nedzimwe nzira. Haisi chete kuti chiteshi chimwe chete chiri kushanda sei, mashandiro acho ese mashandiro aigona kushanda dai akadanwa zvakanaka.
Kure kupfuura kugona kuri nyore kushandisa vezvenhau, kushambadzira kwedigital kunoda nzwisiso yemaitiro evatengi uye zvinokurudzira, kugona kugadzira analytics, uye kutaurirana zvinobudirira nevatengi. Tarisa uone kuti chii chaicho kushambadzira kwedhijitari, nei kuchikosha, zuva-mu-hupenyu hwemushambadzi wedigital uye kuti ungapinda sei muindasitiri.
Vatengesi veDhijitari vane basa, pakupera kwezuva, rekuvaka ruzivo, kupa tsvagiridzo kune vanotarisira, uye kutyaira akakodzera tarisiro yekutendeuka. Iri basa rakanyanya kuoma nhasi kupfuura zvaraive kunyange gore rapfuura. Iwo mapuratifomu ari kuvandudza kuita akabatanidzwa ekushambadzira hubs, big data uye kuyerera data iri kupa chaiyo-nguva mikana yekushambadzira kugadziridzwa, uye vateereri vakasiyana pamatanho ematanho nemidziyo iri kuwedzera kusingaperi kusanzwisisika kuti uwane meseji chaiyo kumunhu akakodzera panguva yakakodzera.
Izvo zvakati, vazhinji vatengesi vedigital zvakare vanongo ita hunyanzvi munzvimbo imwechete, nepo vamwe vachidaro agency yedu tarisa pakuridza nhare muchiyero chakakodzera chemazano. Isu tinobva taunza nyanzvi patafura kuti tibatsire nekubatanidzwa, otomatiki, kutaurirana uye kuitwa kweaya marongero kana isu tinoshanda nechikwata chekushambadzira chatove chiripo kukambani.
Tags: zuva muhupenyuzuva muhupenyu hwemushambadzi wedigitaldigital mushambadziinfographicmushambadzimutengesi wedigital anoitei
10 Bhenefiti Rese Diki Bhizinesi Rinoona neDhijitari Kushambadzira Strategic
Akanyanya Kudhura Anobhadharwa Ekutsvaga Ekutsvaga paBing - Uye Maitiro Ekuzvidzivirira